"Ma Jirto Sabab Aad Ku Xalaashan Karto Qof Binu-aadam Ah Naftiisa" - MW Mustafa Oo La Hadlayey Dadkii Ka Badbaaday Xasuuqii Bulladari - Jigjiga Online
HomeSomalida“Ma Jirto Sabab Aad Ku Xalaashan Karto Qof Binu-aadam Ah Naftiisa” – MW Mustafa Oo La Hadlayey Dadkii Ka Badbaaday Xasuuqii Bulladari
Jigjiga (Hawraarsannews) – Madaxweynaha Dawladda Deegaanka Soomaalida, Mustafe Muxumed Cumar ayaa sheegay in xukuumaddu ay tooska ku shidi doonto dadkii dembiyada ka galay shacabka, isla markaana ay agoomaha dadkii la laayey wax u qaban doonaan, iyadoo dibna loo baadhi doono xasuuqyadii dhacay oo dembiileyaashiina loo raaci doono wixii ay geysteen.
Madaxweyne Mustafe oo la hadlayey shacabka Deegaanka Bulladari oo dhibaato badan kasoo gaadhay nidaamkii hore ee Cabdi Iley oo si xaq-darro ah kumannaan shacab ah ugu xasuuqay halkaas, ayaa waxa uu xusay in dawladnimada iyo horumarku aanay ka qiimo badnayn nafta qofka binu-aadamka ah.
Ugu horreyn Madaxweynuhu waxa uu u sheegay reer Bulladari inuu la socday xasuuqii iyo dhibaatadii lagu hayey, wax badanna uu ka qoray ka hor intii aanu madaxweynaha noqonnin, waxaanu yidhi: “Si gaar ah ayaan ula socday Bulladari ka hor intii aanan xattaa Madaxweynaha noqonin, dadkuna way ogyihiin inaan aad wax uga qori jiray Xasuuqii ka dhacay.”
Madaxweyne Mustafe waxa kale oo uu shacabka deegaankaas u sheegay sababihii dib u dhigay guddi uu usoo diray markii uu xukunka qabtay, waxaanu yidhi: “Markii aan xukunka nimid, labadii bilood ee ugu horreeyey gudahooda waxaanu diyaarinay koox uu Suldaan Cabdiraxmaan iyo odayaal kale ku jiraan, waanu soo ambobixinay, laakiin maadaama xilligaa xukuumadda lays dhex fadhiyey oo dad isbeddelka diidan iyo dad la socdaba la lahaa, arrintii isbaaro ayaa loo dhigay waanay suurtogeli wayday. Wuu la socdaa Suldaanku wax walba waa loo dhamaystiray. Markaa in la yimaaddo waxay muujinaysaa inaanu xasuusnayn dhibaatada ku dhacday aaggan.”
Mustafe Muxumed Cumar, Madaxweynaha DDS waxa uu qiray in xasuuqii loo geystay shacabka halkaas uu ka mid ahaa kuwa ugu xanuunka badan, waxaanu yidhi: “Sida ay sheegeen dadkii iga horreeyey Xasuuqii meeshan ka dhacay halkan oo kaliya ma ahayn, laakiin waxay ka mid ahayd meelihii ugu darnaa ee ugu xanuunka badnaa. Markaa Illaahay wixii wuu inaga dul qaaday oo cid maanta awood u leh inay dad iska xasuuqdo ma jirto, wixii la doonayaba ha ugu marmarsooto, nabad-diid buu ahaa, dawladnimanaan dhisayaa iyo kanaa keerow. Wax naf binu-aadam ah inaad goyso xaq kuu siinaya ama awood kuu siinaya haba-yaraatee ma jiro, dulmi cad oo badheedh ah oo aan loo baahnayn ayuu ahaa iyo ku-tagrifal awoodeed oo aad u fool xun.”
Madaxweyne Mustafe waxa uu carrabka ku adkeeyey qiimaha ay nafta binu-aadamka ahi leedahay, waxaana uu tilmaamay in aanay jirin wax fasaxaya in qof layska dilo, waxaanu yidhi: “Dawlanimadu kama qiimo badna nafta binu-aadamka, horumarku kama qiimo badna nafta binu-aadamka, waxaana garan kara xanuunka ay leedahay iyo sida ay noloshiisa u beddelayso qofka ilmihiisa hortiisa lagu dilo, qofka hooyadii hortiisa lagu dilo, qofka adeerkii hortiisa lagu dilo. Markaa waxa nasiib darro ah dulmigii sidaa u dhacay ee loo wada joogay, saacaddaa aynu joogno waxa jira dad ama dafirsan ama in la soo qaadaba aan ogolayn oo haddii aad ka hadasho u dhigaya inaad cuqdadaysan tahay ama aad soo baadhbaadhayso waxyaabo ay ahayd in laga gudbo, kuwaasi waxay iskugu jiraan kuwii kulmiga geystay iyo kuwo u arka inay iyagana toosh ku shidayso oo diiddan in wax dil iyo dulmi ah lasoo qaado iyagoo ka dhex raadinaya faa’iido siyaasadeed iyo doorasho oo aan maclo lahayn oo doonaya in la xaqiro dadkii la laayey ee sidii aad sheegteen badankooda agoomihii ka hadhay ay halkan fadhiyaan.”
Intaa kaddib, waxa uu madaxweynuhu ugu bushaareeyey shacabka in ay ka daba-tegi doonaan dadkii dhibaatada u geystay, isagoo ka iyagana ka dalbaday inay Allah ka baryaan inuu nabadgelyada innoo sugo, waxaanu yidhi: “Arrintaa waxa aan aaminsanahay in xukuumaddu xoogaa ka gaabinay oo ay ahayd inay tooshka ku shido, waa inaan agoontii wax u qabannaa, waa inaan xasuuqyadii dhacay dib usoo baadhbaadhnaa, waa in dembiileyaashii wixii ay geysteen loo raacaa, waa in kuwii ku garab istaagay dulmigaa taagnaa la ceebeeyaa oo la cambaareeyaa. Taas waxa sidaas loo samaynayaa oo taariikhdii hore loosoo baadhbaadhayaa waa in aanay dib u dhicin wax noocaas oo kale ah.
Haddii la aaso taariikhihii hore, wax diidayaa ma jirto berrina qof kale oo odaya oo qori wataa isaga oo macno kale sheegaya ama ku diimeed ama ku kale inuu haddana dad kale laayo oo xasuuqo oo uu cabbudhiyo oo uu xoog ku dhibaateeyo wax diidayaa ma jiro. Sababta taariikhdii Hitler iyo Mussolini looga sheekeeyaa adduunka waxa weeye in aanay soo noqonin tacaddiyadii noocaas oo kale ahaa.
Waxaan idiinku bushaaraynayaa in maanta waxaasi inaga dhamaadeen, in shacabku ay nabad dareemayaan meel kasta oo deegaanka ka tirsan. Inkasta oo baahiyihii jiray ee xagga nolosha ahaa ay ballaadhan yihiin wali, haddana Illaahay nabadgelyo sannadka inna sii, Illaahayna aynu ka ducaysano inuu inoo sugo nabadgelyadaa.”
Itoobiya Oo Dil Ku Xumi Doonta Qofka Lagu Heli Tahriibin